Fanabeazana · Aogositra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Fanabeazana · Aogositra, 2012
Tantara mikasika ny Fanabeazana tamin'ny Aogositra, 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 13 Aogositra 2012
Niatrika onjanà hetsi-panoherana mitombo izay mitaky ny fandravana ny fitondrana miaramila i Mauritania. Araka ny voalazan'ny mpanohitra[ar], manohitra ny fisian'ny fanjakana misy rafitra ny fitondrana miaramila ho fanampin'ny fikasany hifehy ny fitsarana. Mandritra izany fotoana izany, nandà ny fanapahan-kevitra fanalàna azy amin'ny toerany alohan'ny fahataperan'ny fe-potoam-piasàny ny lehiben'ny Fitsarana Avo ao Maoritania, Seyid Ould Ghailani. Ghailani, izay nipetraka teo amin'ny toerany efa roa taona izao, nandray ity didim-panjakana ity ho tetika fandravàna ny fitsarana sy fitsabatsabahana manala baraka ataon'ny fahefana mpanatanteraka anatin'ny raharahan'ny fahefana mpanao lalàna.
Amerika Latina 12 Aogositra 2012
Tamin'ny Alarobia 8 Aogositra 2012 lasa teo, an'arvonyireo mpianatra nanandrana nidina an-dalambe tao amin'ny làlana Alameda ao afovoan-tananan'i Santiago tainà hetsika iray tsy nahazo alàlana izay niafara tamin'ny fandorana fiarabe fitateram-bahoaka niisa telo. Ireny fihetsika mahery setra ireny dia nitarika ny governemanta hiampanga [es] ireo mpianatra ho nanome vahana ny korontana tamin'ny hetsi-panoherana nataon-dry zareo, raha ny sasany amin'ny mpanao hetsi-panoherana kosa nanontany tena raha toa ka tetika efa tena voaomana marina ny nisian'ireny jiolahimboto ireny.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 08 Aogositra 2012
Mankalaza ny asa sy ny fiainan'i Dr Essam Mohamed Heggy, izay mpikaroka ao amin'ny NASA ihany koa, manampahaizana momba ny siansan'ny planeta ary isan'ireo ao anatin'ny tarika siantifika nirotsaka amin'ny fikarohana momba ny fiainana eny amin'ny planeta Mars ireo Ejiptiana manaraka manaraka ny dian'ny Mars Curiosity rover.. Ireo fanehoan'kevitra ao amin'ny Twitter dia manamarika fa omen'ny any ivelany lanja kokoa ny traikefan'i Heggy
Amerika Latina 05 Aogositra 2012